Apple yakaburitsa beta 3 yewatchOS 4.3 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple yakaburitsa beta nyowani kune vanogadzira izvo ichave iri vhezheni itsva yeApple Watch system. Ichi ndicho chechitatu watchOS 4.3 yekuvandudza beta yakasainwa 15T5187e.
Kunyangwe iyo nyowani Apple Yekuteedzana Series 3 LTE Haisati yasvika kuSpain, iyo betas yeiyo inotevera vhezheni yeOSOS inoramba ichiitika, saka tinogona kunge takatarisana nesoftware vhezheni yacho inozopedzisira yagara nemhando yeLTE yeApple Watch kuSpain.
Apple yakatoburitsa yechitatu beta yeiyo Apple Watch inotevera sisitimu, iyo watchOS 4.3. Iyi vhezheni inouya yakatakurwa nenhau dzinozoita izvo zvakagara zvichiratidzwa naApple neimwe yega vhezheni yesoftware, kuti chigadzirwa chagara chiripo, nekuda kwesystem nyowani, chinotaridzika sechigadzirwa chitsva nekuda kwehunhu hwayo. Mune ino kesi, izvo zvitsva zvinouya kubva paruoko rweiyi vhezheni vhezheni ndezvi:
Iye zvino Apple Watch ichave neAirPlay bhatani mutauri muDirect Center.
Kudzora kwemimhanzi ye iPhone kwadzoserwa.
Nyowani kurodha mifananidzo.
Kunongedzera kwemifananidzo yeiyo Nightstand modhi (zvakajeka kune AirPower)
uye yakareba etcetera iyo yatinozorondedzera muzvinyorwa zvinotevera apo vanogadzira vanodurura dzimwe nhau kunetiweki.
Isu tinoziva kuti nekusvika kweinotevera iPhone munaGunyana, modhi nyowani yeApple Watch inozosvika. Kana isu tichitaura nezve itsva Apple Watch isu tinoreva nyowani dhizaini dhizaini izvo zviri izvo mamirioni evateveri vechiratidzo vari kumirira zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple yakaburitsa beta 3 yewatchOS 4.3 yevagadziri
Apple inoburitsa vhezheni 50 yeiyo Safari Technology Preview browser
AirPods, HomePod uye iPhone X inoita Apple ikambani inonyanya kugadzirwa pasi rese